Qof kamid ahaa ergada doorashada aqalka hoose oo lagu toogtay xarunta ay doorashada ka dhacayso ee magaalada Cadaado - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQof kamid ahaa ergada doorashada aqalka hoose oo lagu toogtay xarunta ay doorashada ka dhacayso ee magaalada Cadaado
November 16, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Xarunta lagu dooranayo xildhibaanada. [Sawirka: Archive]
Cadaado-(Puntland Mirror) Mid kamid ah ergada ka qaybgalaysay doorashada xildhibaanada maamulka Galmudug u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu toogtay magaalada Cadaado ee xarunta maamulkaas, sida ay sheegayaan ilo-wareedyada.
Toogashada oo dhacday maanta oo Arbaco ah ayaa timid kadib markii uu muran ku dhexmaray xarunta doorashada lagu hayo ninka dhintay iyo dad kale, sida ay wararka sheegayaan.
Ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Caraale Dibad .
Maamulka Galmudug wali kama uusan hadlin dhacdadaas.